Madaxda Soomaaliya,Jabuuti, Kenya, Itoobiya, Suudaan, Koonfurta Suudan oo wada hadal deg deg yeeshay galabtay.
MUQDISHO(P-TIMES) – Madaxda dalalka ku mideysan Urur gobaleedka IGAD ee kala ah Soomaaliya, Kenya, Itoobiya, Jabuuti, Suudaanta Koonfureed iyo Suudaanta Waqooyi ayaa yeeshay wada hadal deg deg ah oo ku saabsan xaaladda Xanuunka Corone-Firus ee saameyn ku reebay dunida oo dhan.
Ra’iisal wasaaraha Itoobiya, Abiy Axmed, ayaa sheegey in ay galabta taleefan ku wada-sheekeysteen ra’iisal wasaaraha Suudaan iyo madaxweynayaasha Farmaajo, Geelle, Uhuru Kenyatta iyo Salvakiirka Koonfurta Suudaan, ayna isla meeldhigeen qorshayaal la xariira arrimaha Caabuqan.
Madaxdu waxay ku heshiiyeen in ay isku duubni uga wada shaqeeyaan caqabadaha gobalka iyo ka hortagida faafida Cudurkan, oo ay sheegeen in uu aafo halis badan ku yahay mandiqada geeska Afrika.
Saacado kahor Raysalwasaaraha Itoobiya ayaa ku booriyey wadamada horumaray ee G20 in ay dhaqaale gaaraya 150Bilyan ku taageeraan Geeska Afrika, si looga hortago fiditaanka cudurkan halista badan, maadaama nolosha dad badan ay soo xirmayso.
Mr, Abiy waxa uu sheegey in ay ku heshiiyeen in ay qaab isku duubni ah uga wada-shaqeeyaan caqabadaha gobolka, iyo ka hortagga faafidda Covid-19.
Dalalka Soomaaliya, Kenya, Itoobiya, Jabuuti, Koonfurta Suudaan & Suudaan ayaa soo rogay amaro waa weyn oo ku wajahan xagga safarada iyo xirashada xaduudaha, waxayna xooga saarayaan sidii wax looga qaban lahaa faafida cudurkan.
Itoobiya, Kenya iyo Jabuuti deyman badan baa lagu yeeshay oo qarni dhan jiilashooda dambe iyo horumarkooda ka go’an. Madaxdweyneyaashani waqtigoodu waa ku gabaabsi oo waxa dhici doona doorashooyinka soo food saaran ayaanay isku hubin oo sidaas aawadeeda ayay jeebabkooda u sii camiranayaan.
Kaartadan magaca cudurkan beesha caalamka wax lagaga soo hambagayo waxaa hindisaheeda lahaa Ahmed Abiy oo ku soo baxay baarqabka madaxda Geeska iyo Bariga Afrika. Waxa u sireysan lama dhaadi karo oo dhagrahiisu way qoto dheeryihiin xaqiiqdii. Shax halis ah ayuu Geeska iyo Bariga Afrika ku dul khamaarayaa oo madaxda Soomaaliyeed oo iska dhega la’ ayuu turubkiisa ku shaandheystay. Abiy mar buu dabaqabasho lahaa in badan waa la maqli doonaa.